Beeni Raad Ma leh. Wasiir Caddaani iyo Wuxuu Cago Ku Wato. | Haqabtire News
Beeni Raad Ma leh. Wasiir Caddaani iyo Wuxuu Cago Ku Wato.
January 5, 2017 - Written by admin
Wasiir Cismaan Cabdilaahi Saxardiid(Cadaani) Wasiirka war faafinta iyo dhaqanka ee soomaalind , waxa uu doorbiday, wasaaradii dhamayd ee qaranka ee warfaafinta inuu ka dhigto Mobile uu lee yahay. Oo wuxuu doonana ku shubto wuxuu rabana kashubo. Waxa uu ka dhigay wax milgo iyo maamuus beeshay, siduu doono ayuu u adeegsaday.
Taasina waxa ay ina tusaysaa aqoondrada haysa ninkan wasiirka ah, iyo inaanu lahaynba wax nusdanbeed ah oo ka qabta xumaanta. Maqaal hore oo aan qoray 01/03/2017 waxaan si cad ugu sheegay wasiirku inu shirqoolo iyo dhagaro lagu dagaayo dhaliyarada ay isku haybta yihiin uu ka maleegay magaalada burco…. Xalay oo ay taariikhdu ahayd 01/05/2017 waxa uu Tv Qaranka ee uu ka dhigtay qolka uu lee yahay uu ka sii daayay, war sheeegaaya inuu Burco kula kumay Taafeerayaal Baaxad leh Oo Xisbiga kulmiye ah ku waas oo ah beesha uu ka soo jeedo .. Balse waxaan mar labaad caddaynaaa inanay beentu reed lahayn, warakaasina uu ahaa Been abuur ayna waxba kama jiraan. Iyo isk Oohintii uu bawdada ilmada ku dhooban jiray uumn. Wax beeshiisa ah oo kulmiye taageersani ma jiraan, waxaanu meesha iskugu soo uruuriyay dad war maqabto ah oo la yidhi uun xafalada kaalaya oo aan ogayn wax alla wax laga hadlaayo, ka dibna waxa uu u rogtay iny dadkii ku baryo iyo baroorto.
Waxaan lee yahay Ilmada aad dhabanada iyo Bawdyaha marsanaysaa, maaha mid anaga noo taala, Beesha Muuse Carrana waxay Fikir iyo Aduunba ku taageersantahay Xisbiga Waddani. Kama soconayso Beenta iyo Qudhunka aad dhoobdhobayso ee aad kabo qaadka ugu tahay, Muuse Biixi iyo wixii la hal maala. Kulmiyaha aad nala hor boodaysaa waxa uu yahay aqooni nooguma laabna, adiguna adaa og waxa kaa ilmaysiinaya sidii Dumarki marka la yidhaah waa laydin Furayaa Intay Udub dhaxaadka qabasadaan abroorta iyo Ilmada isku dari jiray. Maanu illaabin halkaad mariseeen Cabdiraxmaan Cabdiqaadir.
Waxaan ku soo afdmeerayaa qormo qoraalkayga, Beel Weynta muuse carre Caddaani iyo Calooshood u shaqaystayaasha ku adeegnayaa kuna baryo iyo dawaris tagaaya, been abuurka reerka inaanay u jooninayn kana hor is taagayn taageerada ay la garab taaganyihiin XISBIGA WADDANI. iygana beenta iyo lacaabka raqiiska ah inaanay waxba u tarayn ha ogaadeen berina runta lays kula soo noqon doono, waxaan lee yahay wajiigiinii ayaad cunteeen wax alla waxaad dhigateen iyo wax aad la hadheen ma jirto, waxaadan noqoteen Tuke baalcad. Isku duubnidii iyo dantii dadka aad xilka iyo masuuliayda u hayseena waxaad ka doorbideen inaad iibiseen oo aad muuse Bixii oo ugu tukubaayay ula booxda aad hoos gaysaan…taasni wax idinka soconaaya haba yaraatee maha idinka iyo waxaad cago ku wadataanba…
Mustafe Ahmed (Sheybe)